Marto Pariente. Ajụjụ ọnụ na onye mmeri nke Cartagena Negra | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Marto Pariente. Ajụjụ ọnụ na onye mmeri nke Cartagena Negra
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Asọmpi na Awards, Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede, Black akwụkwọ
Foto nke (c) José Ramón Gómez Cabezas.
Onye ikwu Marto merie ụbọchị ole na ole gara aga IV Black Novel Nrite na Cartagena Negra, ememme a pụrụ ịme n'onwe na afọ a dị egwu. Enwere m ohere ịchọta onye edemede si Madrid, na-edozi na Guadalajara, na Twitter ma anyị gafere ụfọdụ ozi. Nsonaazụ, nke a Ajụjụ ọnụ na-amasị m ọtụtụ n'ime. N'ihi obi ebere gị n'ijere m ozi na nzaghachi ngwa ngwa gị.
Ọ bụ otu n'ime ememme ole na ole nke ụdị a na-eme n'ime mmadụ n'afọ a dị egwu. Ndị ikpeazụ ya na IV Novel Prize niile dị arọ:
Shipgbọ mmiri ikpeazụnke Domingo Villar dere
Ndị isi anwụrụ ọkụby Claudio Cerdán
Abụ olu ụtọ nke ọchịchịrịnke Daniel Fopiani dere
Tupu ndị na-ahụghị n'anya n'anyanke Inés Plana dere
Uche onye iberibeby Onyeka Onwenu
Onye mmeri bụ Marto Pariente nwere akụkọ na-agụ akụkọ Tony Trinidad, onye uwe ojii obodo ahụ gbara gharịị, na-eme ihe ọ bụla n'ụzọ ọ bụla ma na-ebi ndụ dị jụụ na udo nke ime obodo Guadalajara. Ruo, n'ihi ụgwọ nwanne ya nwanyị ji onye na-ere ọgwụ na mpaghara ahụ, ọ hụrụ onwe ya na nsogbu ruo n'olu ya.
Ajụjụ ọnụ nke Marto Pariente
Ì chetara akwụkwọ mbụ ị gụrụ? Na akụkọ mbụ ị dere?
MARTO PARIENTE: Nke mbu, daalụ nke ukwuu maka ajụjụ ọnụ a. Akwụkwọ mbụ m gụrụ, ewezuga akwụkwọ ụmụaka na ndị na-eto eto, bụ Ihe omimi nke Lot nke Stephen King dere, kpochapụwo vampire akụkọ na obere obodo Maine. Na mbụ akụkọ a na-akpọ Ebumnuche Ebumnuche, ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ na o nwetara ihe nrite. M na-esite na mbuso agha ndị ọbịa na Mejorada del Campo na, n'ezie, ụmụaka nke CP Europe zọpụtara obodo na ụwa.
Kedu akwụkwọ mbụ metụtara gị na n'ihi gịnị?
PM: Okporo ụzọ, nke Cormac McCarthy dere. Enwere m oke site na oke nhịahụ ya, eziokwu ya na inwe obi abụọ dị adị banyere ezi na ihe ọjọọ. "Papa, anyi bu ndi oma?"
Onye edemede kacha amasị gị ma ọ bụ onye metụtara ọrụ gị karịsịa? Nwere ike ịhọrọ karịa otu na site na oge niile.
MP: Ọtụtụ. Ihe n'echiche nke ọ bụla nwere ọtụtụ ndị edemede, akwụkwọ, ihe nkiri, usoro ... Ndị a bụ ole na ole: Ken bruenJames Sallis, James ellroy, Donald Westlake, Jim Thompson, James Crumley, Tarantino, ụmụnne cohen. Guy Richie, Jose Luis Alvite, Luis Gutierrez Maluenda.
Kedu akparamagwa dị n'ime akwụkwọ nke ị masịrị ị ga-ahụ ma mepụta?
MP: Agaghị atụ aro ndị edemede n'ụdị akụkọ m na-agụkarị. Ọ ga-amasị m izute Tom Z Stone na Mati, mkpụrụ edemede abụọ si saga nwere otu aha Joe aslamo. Createmepụta? Lee, m na-aga ihe nkiri na usoro. Ọ ga-amasị m ịmepụta ụdị agwa ọ bụla na mbara igwe Fargo.
Ọ bụla mania mgbe ọ na-abịa na-ede ma ọ bụ na-agụ?
MP: Ana m ede n'ụtụtụ, n'isi ụtụtụTupu ụmụaka ebili Gụọ, ebe ọ bụla. M na-ebukarị akwụkwọ mgbe niile.
Na ebe ị họọrọ na oge iji mee ya?
MP: Akụkụ edemede m bụ tebụl dị n'akụkụ ime ụlọ. M na-agbalị ime ka ọ a onye ohere, ma eziokwu bụ na m na-eso ya na akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị rụọ n'ụlọ, a kaktus na Lego ọgụgụ na nwa bebi.
Dị kachasị amasị gị na mgbakwunye akwụkwọ akụkọ mpụ?
PM: Rorjọ na akụkọ sayensị.
Kedu ihe ị na-agụ ugbu a? Na ide?
MP: Anọ m Ọ heavenlyụ nke eluigwenke Donald Ray Pollock dere. Unyi, ala nke plateau nke United States guzobere na mmalite afọ nke narị afọ nke XNUMX. Anọ m ugbu a akafiakde ese n̄wed emi ke ọyọhọ n̄wed ita (a noir chi ojiji) nke ga - ahụ ìhè na mmalite afọ.
Kedu ka ị chere na ebe mbipụta akwụkwọ dị maka ọtụtụ ndị ode akwụkwọ enwere ma ọ bụ chọọ ibipụta ya? Na ndụmọdụ ọ bụla ịchọrọ ịgbakwunye ndị edemede ọhụrụ a?
MP: Mbipụta n’okpuru akwụkwọ nbipụta gbagwojuru anya, mana nke ahụ abụghị ihe ọhụụ. Ga-arụsi ọrụ ike ma na-agba mbọ ime ihe n’ụzọ ziri ezi mana ọ naghị ekwe nkwa nsonaazụ achọrọ. Abụghị m onye na-enye ndụmọdụ, mana enwere m ike ịgwa gị na amalitere m ibipụta onwe m nakwa na nke nta nke nta, ọnụ ụzọ na-emepe.
Ọ bụ oge nsogbu anyị na-enwe na-esiri gị ike ma ọ bụ na ị ga-enwe ike ịnọrọ na ihe dị mma n'onwe gị na akwụkwọ akụkọ n'ọdịnihu?
MP: Nsogbu a ga - ahapụ nsogbu na obi ilu na, n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, ga - ejedebe na - abanye n'akụkụ niile nke ndụ n'ozuzu yana ọdịbendị. Nke a na-eme mgbe nnukwu agha na nsogbu ego. Onwe ya, ọ dịla a na-egbu mgbu ogbo, nke ọghọm ezinụlọ. Ndị ọkachamara, a na-apụghị imeri emeri.
Ekele m ndị niile na - agụ ya ma kelee gị nke ukwuu maka ajụjụ ọnụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Marto Pariente. Ajụjụ ọnụ na onye mmeri nke Cartagena Negra